SHAGGEE WALIIN SAAWWA TIKSINEEN YAADE - Xalayaa Jaalalaa
Ani Likkaasaa jedhama amma biyya Germany Magaalaa Munich jiraadha. Jiruun baqaa silaa gadhee dha. Fuutee namaan joorti. Biyya koo Oromiyaa irraa dhiibbaa gabroomfataan osoo hin bahiin dura gaafa ijoollummaa Goodaa Haroo jedhamtu iddoo anii fi ijoolleen ollaa waliin itti jabbii tiksuu haga horii gurguddaa tiksuutti itti guddanneetu jira. Intala ollaa keenyaa kan Hawwinee jedhantu jira. Hawwineenfaa dubara malee dhiira hin qaban. Maaram gara isaaniitti garaa jabaatten seha. Akka dabaafimmoo durbi mana sanaa ilaalanii lafa hin ilaalan. Guddaa hamma xinaatti lookoo qofatu guutee bahe. Ani umuriin kan na gittu Hawwinee dha. Hawwineen jabbootaa fi hoolaa na waliin tiksaa turte.
Hawwineen adeemsa keessa wal barachaa dhufne. Gaaf tokko tokko hoolaa fi jabbii isheen tiksuu dhuftu harkaa fuudheen tiksaaf. Gaafan ishii faana ooluu barbaadummoo sii hin tiksu oolii tikfadhu jedheen lola itti bana. Takka boossee booda akaayii gudunfattee fiddee naaf laatti. Anis akaayii kiyya irraa fudhee achi galagalee kokkolfaa saramsa. Osooma jennuu mana barumsaas gallee barnoota barachuu jalqabne. Akka tasaa dareen keenya tokko dha. Namni gaafa isheetti dubbatu dhiiga kootu danfee gubachuu ka’a. Ani waansaa hin beekun ture. Sababa namni itti dubbateefan dhaqee gurrarraa itti iyyisiisee deebi’ee taa’a. Sababan ishee rukututtti guyyyaa meeqaaf meeqa harka miila koo jala baasee gurra qabadhee dafqaa oole. Barsiisaan keenya Dachaasaan silaa anaan diinuma na godhatee harcummee jiidhaa lawwee muratee fidee dhufee hirkisee barnoota nu barsiisa. Inni ija koo eega, ani ija Hawwineen eega. Akkanatti baroota dheeraa erga dabarsineen booda umuriin keenya saalfiirra geesse.
Anis sagaleen na jijjiiramuu jalqabe. Dargaggeessa ofirratti ilaaluu eegale. Hawwineenis guntuta baafatte. Mucaan kaleessa daalattiin waliin jabbii fi saawwa tiksinu cululqxee xuwwee abidda bira waggaa 30 teesse fakkaatte. Hawwineen magaala, ija keessa kuullee, ilkaan cabbii caalaa addaatu, kan tumaan baddeessaa bilchina tole fakkaatu dha. Egaa anis waa’eeshee yaaduu eegale. Osoo ganama mana barumsaa dhaqee argachuuf hedduu ariifadha. Mana barumsaa baheellee horii mooraatti galchee gara mana saaniitti gadi fiiga. Mooraarran dhakaa manatti darbadhee boroon fiigaa dhuftee na dubbiftee deebiti.
Ayii anaa maaltu akkas na godhaa ture laata? Ani maraatuu ture jechuu dha qabanii na hin hiine malee. Kanumaan anii fi Hawwaan koo qabdoo taa’uu eegalle. Qabdoon keenya mormaa ol malee irraan gadee hin fiigamu. Ijoolleen ammaa silaa gaara osoo hin agarre godaa haxaawwatti. Safuu hin cabsiinaa Oromoon safuu qaba yaa dargaggootaa. Waggaa muraasa booda ani gara iddoo biraa Obboleessa kiyya bira taa’ee barachuun deeme. Hawwineenis barnootashee itti fuftee osoo barachaa jirtuu gidduun butiin butamtee heerumte. Anis lafan jiruu ka’ee gaafachuu dhufe. Gaafan argu nama na waliin nyaatee dhugetu Hawwaa koo nyaate.
Hiriyyaa gadhee meeqaaf meeqatu jira silaa. Dhimma kana maatii faana ta’ee iyyadhe. Mana Murtiitti dhiyyaattee Hawwaan fedhii koo miti jettee himatte. Kanumaan hiriyyaa koo fi warra isa faana duulanitti Abbaan Murtii itti murteessee hidhaman. Kanaan booda Hawwineen balaa jala jirti waan ta’eef akkan fudhee deemu maatiinshee fi maatiin koo maree godhanii fudhee deeme. Yeroon deemu obboleessi koo na lole. Anis manaa bahee kophaa kireeffadhee Hawwineen waliin jireenya eegalle. Osoo waliin barnoota keenya barachaa jirruu ani gidduun rakkoon mana barnoota keessatti na qunnamuu eegalan. Sana hunda damdamadhee barachuu dadhabee biyyarraa baqachuuf dirqame. Amma HawwineenYuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota ishee xumurtee dhaabbata dhuunfaa tokko keessa hojjetti. Ammas nan yaada, nan dharra’a, nan dheebodha, akka buddeenaan beela’aan. Jaalala dhugaan isheef qaba. Hiriyyee koo ishee gaafa ijoollummaa, lafa hoolaa fi jabbii tiksuutti wal barre sin jaaladha.